Ntuziaka kachasị mma iji kọwaa vidiyo (yana ihe atụ) | Martech Zone
O nwere ike ịbụ na ị hụla ọtụtụ weebụsaịtị na-eji vidiyo na-eme egwuregwu na peeji nke ọdịda ha. N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị kpọrọ ha vidiyo na-akọwa ma ọ bụ vidiyo ụlọ ọrụ; ha niile na-eme otu nzube: ịkọwa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa, nke na-eme ha nnukwu ngwa ahịa maka azụmaahịa ọ bụla.
Kedu ihe kpatara ụdị vidiyo dị iche iche nke nkọwa dị iche iche? Styledị ọ bụla na-amasị ụdị ndị na-ege ntị dị iche iche ma na-emetụtakwa mmefu ego nke mmepụta vidiyo ọ bụla. Iji mee ka ndị na-ege gị ntị lebara anya ma bido ịtụgharị nke ọma, ị kwesịrị ịma nke ọ bụla style nke Onye Nkọwapụta Video. Ajụjụ bụ:
Gịnị bụ ihe kasị mma ịke nke animated akọwa video gị website?
Anyị chịkọtara ndepụta nke ụdị vidiyo vidiyo na-ewu ewu, yana ndụmọdụ anyị na-akwadoghị maka nke ọ bụla n'ime ha.
Nke a bụ nbudata ihuenyo dị mfe ma ọ bụ ihe nkiri vidiyo na-egosi otu esi eji mmemme, weebụsaịtị ma ọ bụ ngwanrọ. Screencast videos bụ kasị ala-mmefu ego ụdị video ma ohiha bara uru. Vidio ndị a gbasara agụmakwụkwọ karịa ịkọ aha. Ha na - abụkarị vidiyo (karịa 5 nkeji), ma na - arụ ọrụ nke ọma maka atụmanya ndị na - achọ ilele otú ngwaahịa si arụ ọrụ tupu ha emee ihe.
Style Katoon ma ọ bụ Ihe Egwuregwu Egwuregwu
Nke a bụ otu n'ime ụdị vidiyo vidiyo kachasị ewu ewu na ahịa. Otu animation na-eduzi akụkọ, onye gosipụtara nnukwu nsogbu ọ na-enweghị ike idozi. Nke ahụ bụ mgbe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị gosipụtara… ịchekwa ụbọchị!
Agwa ahụ na - anọchite anya gị (ndị na-ege ntị), yabụ ọ dị mkpa ịnwe agwa njirimara omenala nke metụtara ha, na-eme ka ụdị gị dị mma site n'inye ya mmetụta na mmụọ. Kindsdị vidiyo ndị a nwere nnukwu nsonaazụ n'ihi na ha na-adọrọ uche ndị na-ekiri ngwa ngwa ma na-atọkwa ụtọ ikiri.
Ihe nkiri Whiteboard
Usoro ihe omimi a dị mma site na onye na-ese ihe na-ese ihe na bọọdụ mgbe igwefoto na-edekọ ya. Ka oge na-aga, usoro a ghọrọ usoro ma mepụta ya ugbu a site na ntanetị. Laa azụ na 2007, UPS gosipụtara Whiteboard Commerce, yana na 2010 Royal Society of Arts mepụtara ihe ngosi eserese site na okwu ahọpụtara, na-eme ka ọwa Youtube nke RSA bụ ọwa # 1 na-enweghị uru n'ụwa niile.
Ihe ngosi Whiteboard bụ usoro na-adọrọ adọrọ, n'ihi na ọ nwere usoro mmụta, ebe e mepụtara ọdịnaya ahụ n'anya onye na-ekiri ya.
Motion eserese bụ, nnoo, ihe eserese na mmegharị nke na-eji ike nke agba na ụdị iji zipu ozi dị mgbagwoju anya nke agaraghị enwe ike ịkọwa. Vidio ndị a na-enye ụdị ọrụ maka azụmaahịa nwere profaịlụ dị oke njọ ma bụrụ ụzọ dị mma iji kọwaa echiche ndị na-adịghị adị.
Vidiyo ndị nkọwa a na-emetụta nsogbu B2B.
Ndị na-emegharị ihe na 3D Ihe
Motion eserese eserese na 3D ọcha mwekota na-eweta ọdịdị mara mma na ọkaibe. Ha dị mma iji mee ka ụlọ ọrụ gị pụta karịa asọmpi ahụ.
Motion Graphics bụ nhọrọ zuru oke maka ụlọ ọrụ na ngwaahịa metụtara teknụzụ ọhụụ, ọrụ dijitalụ, ngwa ma ọ bụ ngwanrọ.
Style Cartoon na Mkpụrụ Eserese
Cartoon Style Explainer Videos with Motion Graphics bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu nke vidiyo animated na ebe ahụ, dịkwa ka ọ dị mfe, ọ na-eweta usoro nke usoro. Ihe odide eserese na-eduga akụkọ ahụ ma nyekwa ndị na-ege ntị nso nso, ebe eji ihe nkiri eserese eserese eme ihe iji kọwaa echiche dị mgbagwoju anya.
Site n'ụdị a, anyị ga - enweta ụwa niile kachasị mma - Akụkụ enyi na enyi na ọchị ọchị nke vidiyo ụdị katuunu na ike ịme egwuregwu nke usoro eserese eserese.
Anyị na-akwado ya maka nkwukọrịta B2C, mana ha nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka obere azụmaahịa na mmalite mmalite.
Kwụsị-ngagharị ma ọ bụ Claymation Animated Videos
Vidio na-akọwa ihe nkwụsị bụ otu n'ime usoro kachasị ochie ebe ọ bụ na ha anaghị adabere na teknụzụ dijitalụ dị elu! Ndị a bụ vidiyo ejiri aka mee - etiti site na etiti.
Emepụtara ihe ngosi a site na ịdekọ igbe ọ bụla, ma ọ bụ ka na-ese foto ma na-akpọ okpokolo agba ndị ahụ edere azụ na ngwa ngwa, na-ewe ogologo oge iji mepụta. Nsonaazụ ya dị iche ma dị ịtụnanya. Kwụsị ngagharị bụ usoro mara mma mgbe emechara ya nke ọma, ha nwekwara ike ịdị oke ọnụ.
Anyị na-akwado ụdị vidiyo a ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji usoro mmetụta na ndị na-ege gị ntị.
Ihe ngosi 3D emere
A ọkachamara 3D animated video nwere ike ịbụ n'ezie ịtụnanya, ebe ọ bụ na e nweghị nsọtụ ihe a 3D video pụrụ ịrụzu. Agbanyeghị, nhọrọ a bụ otu n'ime ihe kachasị ọnụ, yabụ na ha abụghị nhọrọ maka mmalite na obere ego.
Ọ bụrụ n’ezie n’iche maka ịme 3D animated video ma nwee ike imeli ya, ị kwesịrị ibu ụzọ rụọ ọrụ ụlọ gị ma chọọ ụlọ ọrụ nwere ahụmịhe. A obere mmefu ego 3D animated video pụrụ n'ezie iduga-adịghị mma na ya pụta.
Ugbu a ị nwere nnukwu nyocha ụdị ụdị vidiyo na-akọwa ihe nkiri na-adabara nke ọma maka ihu ahịa azụmahịa gị, nke ga-enwetakwa nlebara ndị na-ege gị ntị anya. Chọrọ ọzọ? Download ebook ebook n'efu nke Yum Yum Video - The Ultimate Guide to Explainer Videos!
Ngosi: Yum Yum nyeere aka tinye post a maka Martech Zone ndị na-agụ akwụkwọ na anyị esorola ha rụọ ọrụ ozugbo!
Tags: 3d vidiyo vidiyoIhe ngosi egwu 3d3d vidiyovidiyo na-esekatuunu videoagwa animated videoụrọ animationụrọnkọwa videonkọwa vidiyoihe nkiri eseresengagharị eserese vidiyoihuenyo vidiyonkwụsị-mmegharịvidiyo vidiyo na-eme ihe ngosikọwaa ihe nkọwa nke vidio
Sep 21, 2014 na 6:04 PM
Anọ m ebe obibi nke ịche ụdị ụdị ihe ndị a nke mere ka akọwara ya nke ọma.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ederede na vidiyo a.
Mee 14, 2015 na 6: 16 PM
Ugbu a mgbe ọ bụla ndị ahịa m jụrụ ụdị vidiyo nkọwa m na-eme, enwere m ntuziaka aka a iji gosi ha. Daalụ Douglas maka itinye ndu a ọnụ. Ọ nwere ebe ọ bụla unu nwere ike igosipụta azụmaahịa m na blọgụ gị? M tinye email m na ngalaba nkọwa